WARAYSI CAJIIB AH OO AAN LA YEELANAY AXSAN LAACIB SHIIKHAALOOW – Cayaaraha dunida
Waxaa Illaah mahadii ah in aan la kulano, oo aan waraysano mid ka mid ah xidigihii laacibiinteenii Soomaaliyeed (Legends) ee kubadda cagta dheeli jiray wixii ka horeeyey 1991-gii. Laacibkaas oo aan dhihi karo wuxuu magac, sharaf iyo sumcad waynba ku lahaa dalkeena iyo dadkeenaba. Qofkii maqla magaciisa, ama arko muuqiisa ee ka mid ah bahdii xiisayn jirtay ciyaarihii dalka, qaasatan kubadda cagta berisamaadkii, waxaa hubaal ah inuu markiiba soo xasuusanayoShiikhaaloow midka uu yahay, hase yeeshee qaar badan oo ka mid ah dhalinta da’da yare e maanta ciyaarta ama daawata ama xiiseeysa isboortiga waxaa lagayabaa in aanay maqal magacaas.
Hadaan dib uu jaleecno taariikhdiisa kubadda cagta iyo midka uu yahay ciyaartooygani. magaciisa oo buuxo waa Max’ed Xuseen Cali waxaase lagu naanaysaa Shiikhaaloow.
Shiikhaaloow wuxuu ahaa hadaan afkayga beenta ka reebo, ciyaartooyda Soomaaliya kubadda cagta ciyaari jirtay ama soo martay taariikhda, hadii la yiraahdo kee ugu fiicnaa? Mid u soo istaagi karo in uu kaalinta koowaad soo galo, inkastoo ay akhristayaasheena ay fikrad ka duwan ka qabi karaan ra’yigayga.
Shiikhaaloow wuxuu ahaa ciyaartooy aad ugu wanaagsan xaga weerarka ama gool dhalinta wuxuuna taas ku muteystay inuu soo jiito dhamaan bahweynta isboortiga jecel. Shiikhaaloow hada wuxuu gacanta ku hayaa caruur da’yar oo la rabo in ay metesho kooxdii Minishiibiyo. Wuxuu ku nool yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Shibis waa xaas leh caruur fara badan.
Hadal haan ma buuxshee, hadaan gudo galno waraysigii aan la yeelanay axsan laacib Max’ed Xuseen Cali (Shiikhaaloow), wuxuu u dhacay sida tan:
Shiikhaaloow: Intii aan u cayaarayay naadiga D/hoose waxaan kula guuleestay sanadkii 1975 – 1976 oo aan ku guuleeysanay horyaalkii dalka iyo anigoo ku guuleystay iskoorkii gool dhalinta.
1984 waxaan ku guuleysanay koobkii Jenaraal Daa’uud.
1985 – 1986 waxaan ku guuleysanay horiyaalkii dalka. Xagga gool dhalintana sanadkaas aniga ayaa ku guuleystay.
Shiikhaaloow: Cayaartii iigu farxadda badneyd waxey aheyd sanadkii 1978 – 1979 ciyaar ka tirsan horiyaalka oo aan la yeelanay naadiga LL PP am Jeenyo sidaad u taqaaniin, ciyaartaas kooxda Jeenyo ayaa laba gool nooga hormartey. Gabagabadii ciyaarta ayaa dhamaan intii badnayd taageerayaasheenii iyo xataa gudoomiyaheenii naadiga ay ka dareereen garoonka iyagoo dhamaantood qabay in nalaga badinayo, nasiib wanaag daqiiqadihii ugu danbeeyay ayaan helnay laba fursad oo qaali ah waxaana ku dhalinay laba gool, ciyaartiina waxay ku dhamaatey bar bardhac 2 – 2 gool ah.
Sanadkii 1997 – 99 waxaan macalin u ahaa kooxda la yiraahdo Kesko.
Sanadkii 1999 – 2000 waxaan macalin u ahaa koox la yiraahdo Gasko.
Sanadkii 2000 – 2001 waxaan waday koox la dhaho Gaheyr.
Sanadkii 2001 – 2003 waxaan waday koox la dhaho Dahabshiil, kooxahaas oo kuligood ka dhisnaa dalkeena.
Kubadda: Ugu danbeyn maxaad u soo jeedin lahayd Ciyaartoyda da’da yar ee xiliyadan dambe soo baxay ?
Shiikhaaloow: Aniga Shiikhaaloow ahaan waxaan talo u soo jeedin lahaa dhamaan ciyaartoyda da’da yar ama dalka gudihiisa ha joogo ama dibadiisaba ee jecel Mustaqblka in uu noqdo ciyaartoy waayo arag ah in uu marka hore iska dhiso xaga jirka ama (Physical-ka) uuna sameeyaa tababar joogto ah uuna qaato awaamiirta ama casharada uu bixinaayo macalinka markaas hormuudka u ah naadiga uu ka tirsan yahay ama GYM-ka, hadii taas la waayo waxaan ogahay inuusan ciyaartoygaas gaareyn heerkii uu rabey ama laga rabey.
Shiikhaaloow: Waxaan halkan mahad aan la soo koobi karin uga jeedinayaa websitka kubadda.com sida hagar la’aanta ah ee uu waqtigiisa u hurayo inuu bulshada u soo bandhigo taariikhihii hore ee isboorti iyo kuwa maantaba.
Shiikhaaloow oo cashar bixinaayo
Akhristayaasheena qaaliga ahoow waxaa intaas inoogu dhamaaday wareysigii xisaha lahaa ee aan la yeelanay axsan laacib Max’ed Xuseen Cali (Shiikhaaloow).